နှစ်ဘက်မြင်တတ်ကြပါစေ - For her Myanmar
0 View(s) • by Hnin Ei Oo
လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဘက်တီးမှမြည်တာမို့ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူမှပိုပိုသာသာမနစ်နာတတ်ပါဘူး။
လက်တွဲဖော်ဆိုတာ အဆိုးအကောင်းအကျိုးအကြောင်းအားလုံးကို အတူတူမျှဝေခံစားကြတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူစိမ်းတွေလေ။ ကောင်းတူဆိုးဖက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကောင်းလဲအတူတူ ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလဲ တွဲဖက်နေကြတဲ့ လူသားနှစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်၊ ညှိလဲမယူကြတဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တွေများလာတော့ ဘာတွေလိုအပ်နေကြတာလဲ၊ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ….
နှစ်ယောက်တစ်ဘဝလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ဘယ်သူမဆို ဒီတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ပဲ တစ်သက်လုံးရှေ့ ဆက်သွားချင်ကြမှာပါ။ အချစ်တစ်ခုထဲနဲ့ဘဝဖြစ်မလာသလို ပိုက်ဆံနဲ့လဲ အရာရာပြည့်စုံမနေပါဘူး။ နားလည်မှု၊ တာဝန်သိတတ်မှု၊ လေးစားမှု စသည်ဖြင့်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးမှ တကယ်ကိုအများကြီးပါ။ ချိန်ခွင်တစ်ခုလိုပေါ့ နှစ်ဘက်က အလေးမျှနေမှ ညီနေမှာလေ။ ဒီနေရာမှာ တာဝန်သိတတ်မှု အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်ပေါ့။ ဟိုအရင်ခေတ်ကလို အိမ်တွင်းအောင်းပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွေကို ကုတ်ကပ်လုပ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ယူထားတဲ့တာဝန်အပြင် ထပ်တိုးလာတဲ့တာဝန်ကိုပါ နှစ်ယောက်လုံး နိုင်နိုင်နင်းနင်းလုပ်စေချင်တာပါ။ (လေချိုအေးလေးနဲ့ ကူညီပေးခိုင်းတာလဲတစ်မျိုးပေါ့၊ နေတတ်ရင် ကပ်တိုးချွဲလို့တောင်ရသေး :P)
နောက်ပြီး အိမ်ထောင်တစ်ခုပြိုကွဲဖို့ဆိုတာ တတိယလူပေါ်လာမှ လို့ထင်ရင် ယောင်းတို့သိပ်မှားသွားမှာပေါ့။ အဖုအထစ်သေးသေးလေးတွေကို သူသည်းခံတိုင်း ‘ငါမှန်လို့ သူငြိမ်နေတာပေါ့’ ဆိုတဲ့အသိမျိုးထက် ‘ငါရောမှားခဲ့တာရှိလား’ ဆိုတာပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ သည်းခံနေပေမဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါ သူလဲလူသားထဲက လူတစ်ယောက်မို့ အကြိမ်ကြိမ် သည်းခံဖို့ခက်ခဲသွားပြီး နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ လောကနိယာမအရ ဘယ်သူ့အပေါ်ကိုမဆို ကိုယ်က လူပီပီသသမဆက်ဆံရင် ကိုယ့်အပေါ်လည်း လူပီသတဲ့သက်ရောက်မှုမျိုးပြန်ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ချင်းစာပေးမှ ကိုယ့်ကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာကြမှာပေါ့။ အားလုံးကနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်း သွေးပူနေတုန်းအချိန် အချင်းချင်းအပြစ်တွေ အပြန်အလှန်ဖို့နေမယ့်အစား နောက်ထပ်ပြီး ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင် ငါဘယ်လိုပြင်ဆင်နေထိုင်မလဲ ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားပြီး စိတ်သန့်သန့်နဲ့ ဘဝကိုရှေ့ဆက်စေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို လူဆိုတဲ့အမျိုးက ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကိုယ်အမှန်မလား????
Related Article>>> သူချစ်လား၊ ကိုယ်ချစ်လား?
ဒီလိုတွေပြောနေလို့ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန် ဖြေရှင်းဖို့မစဉ်းစားဘဲ အလွယ်နည်းလိုက်ပြီး ဖောက်ပြန်သွားတဲ့လူက အပြစ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ (သည်းမခံနိုင်လို့ ဖောက်ပြန်မိပါတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မွေးကတည်းက သန္ဓေယုတ်ထွက်လာတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ကလည်း ယောင်လို့တောင် ကာဗာလာမယူပါနဲ့။ အဲဒါ ယုတ်မာပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ လူမဆန်တဲ့လူတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ) ဘယ်သူမဆို မွန်းကြပ်လာရင် လွတ်လမ်းကိုရှာတတ်ကြပေမယ့် သူများကို မထိခိုက်မယ့် လွတ်လမ်းရှာရမှာပါ။ ဒီတစ်ယောက်မကောင်းရင် နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းခွင့်က *လူတိုင်းမှာရှိပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ ပြီးပြတ်သွားမှ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ရပါမယ်။ ဒါက မပြဌာန်းထားပေမယ့် စောင့်ထိန်းရမယ့် ဝတ္တရားလေ။ ယောင်းတို့ ယောကျာ်းရယ်၊ မိန်းမရယ်မဟုတ်ဘဲ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အပေါ် ဂရုမစိုက်ဘဲ စိတ်ဒုက္ခ အမြဲပေးတတ်တဲ့လူ၊ တာဝန်မကျေတဲ့လူနဲ့ တစ်သက်လုံးနေနိုင်ပါ့မလား။ (အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလက်တွေ့ဘဝပါ။ လူတိုင်းပျော်ချင်ကြတယ်။ အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မယ်ထင်တဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ဆုပ်ယူလိုက်မှာပဲ။) ဒါကို ‘ဟာ ငါနဲ့ယူပြီးပြီ။ ငါ့ဒဏ်မှန်သမျှနင်ခံပုံစံမျိုးဆို ဘယ်သူ့ကိုမှမယူတာအကောင်းဆုံးပါ။’ ဟုတ်ပြီ။ တစ်ဘက်လူကလဲ ငါလုံးဝသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး ဆိုရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပြောပြီး ညှိနှိုင်းပါ။ တကယ်လို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ပါ။ မပြတ်မသားနဲ့ဆို လူမှုရေးအရှုပ်အရှင်းတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေလဲ အရမ်းများတာမို့ ဒါလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်။
လူ့လောကကြီးက အရမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ်ယောင်းတို့ရယ်။ လူဆိုလဲတာဝန်တွေသိရုံတင်မက ကျေပါကျေနေမှ၊ ကိုယ်လိုချင်သလောက်လဲပြန်ပေးနေဦးမှ၊ ဝတ္တရားကလဲ စောင့်သိတတ်ဦးမှဆိုတော့ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီး ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ အတူရှိနေတဲ့လူအပေါ် အတတ်နိုင်ဆုံး ကောင်းပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ရှင်သန်ပါ။ လူပီသတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နေထိုင်ပါ။ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကို ဖန်တီးပါ။ သူများအတွက်လဲဖန်တီးပေးပါ။
ယောင်းတို့အားလုံး စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကို အသက်ထက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Tags: complicatedlife, Relationship
မျက်မှန်တပ်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းများ
Hnin Ei Oo February 23, 2018